MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Mongolia to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Bangkok, Thailand
by adminmofa on 29/02/2016 at 6:25 AM
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Mongolia to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Bangkok, Thailand.
Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg was born on 23 February 1974. He graduated from the National University of Mongolia in 1999 specializing in British Studies and International Relations. Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg received Master’s Degree in International Relations from the Australian National University in 2008. He joined the Ministry of Foreign Affairs of Mongolia in 1999 and served in various capacities. Since August 2015, he has been serving as the Ambassador of Mongolia to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESCAP in Bangkok.
Dated. 29th February 2016
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ တက်စ်ဘီလ်ဂူအန်း တူမာကူလာဒ်အား ဗန်ကောက်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်ထားရန် အဆိုပြုလာခြင်းကို သဘောတူညီပြီး ဖြစ်သည်။
မစ္စတာ တက်စ်ဘီလ်ဂူအန်း တူမာကူလာဒ်ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက် နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် မွန်ဂိုလီးယားအမျိုးသားတက္ကသိုလ်၊ သံတမန် ရေးရာကျောင်းမှ ဗြိတိန်ရေးရာနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာအထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် သြစတြေးလျအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘာသာရပ်ဖြင့် မဟာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ မစ္စတာ တက်စ်ဘီလ်ဂူအန်း တူမာကူလာဒ်သည် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှစတင်၍ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင်‌့ ကုလသမဂ္ဂ အာရှနှင်‌့ ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ကြီးတွင် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ၏ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
၎င်းသည် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားနှစ်ဦးထွန်းကားသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်